Pôrtô Rikô Tafiditra Amin’ny Ampamoaka “Taratasin’i Panama” · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Jenny Benyon
Voadika ny 21 Avrily 2016 4:47 GMT
Tratran'ny fiantraikan'ny antonta-taratasy tafaporitsaka avy tao amin'ny kabinetran'ny mpisolovava Panameana Mossack Fonseca ihany koa ny sehatra ara-bola ao San Juan, renivohitr'i Pôrtô Rikô, fantatra amin'ny hoe la Milla de Oro [Maily Volamena]. Sary avy amin'i Thief12/Carlo Giovanetti tao amin'ny Wikimedia Commons. Zon'ny mpamorona CC BY-SA 3.0.
Tsy afa-bela ihany koa i Pôrtô Rikô taorian'ireo antontan-taratasy tafaporitsaka avy amin'ny kabinetran'ny lalàna Panameana Mossack Fonseca, izay mahavoarohirohy olona maromaro avy amin'ny saranga ambony eo amin'ny fiarahamonina manerantany.
Hitan'ny Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico [Foiben'ny Gazety Fanadihadiana] ihany koa ny fisian'ny Porto Rikana maromaro mpanjifan'ny kabinetran'ny mpisolovava ao Panama Mossack Fonseca. Anisan'izany ny Galephar Puerto Rico Limited, Puerto Rico GlobalTek Ltd., Banco Popular de Puerto Rico ary Omega Engineering.
Ny Omega Engineering dia nanomboka nanao tetikasa fanorenana mampiady hevitra, fantatra amin'ny anarana hoe Paseo de Puerta de Tierra, moron-dranomasina fandehanan-tongotra mampitohy an'i Condado Peninsula amin'ny distrikan'i Puerta de Tierra eo amin'ny fidirana ao amin'ny nosy Old San Juan, sehatra manan-tantaran'ny renivohitr'i Pôrtô Rikô. Na izany aza, najanona tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa ilay tetikasa noho ny tsy fahampian'ny vola ilaina amin'ny famitàna azy. Niampanga ny filoha sy ny tale mpitantana ny Omega Engineering, Oscar Iván Rivera ho nandray anjara tamin'ny tetika famotsiam-bola ny Fitsarana Fara-tampony ao Panama.
Voarohirohy tamin'ny tantara ratsy Mossack Fonseca ihany koa i Ramón Luis Ayala, mpihira reggaeton fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Daddy Yankee, izay miseho ao anatin'ireo antontan-taratasy tafaporitsaka ny anarany fa tompon'ny orinasa offshore [an-dranomasina] Arion Investments LLC. Voalaza fa mpanao famatsiam-bola ity orinasa ity, araka ny asongadin'ny fanadihadiana notarihan'ny Centro del Periodismo Investigatorio.
Fahagagana sy fahatezerana amin'ny ankapobeny ny fanehoan-kevitra nateraky ny ampamoaka Mossack Fonseca. Na izany aza, nilaza tamin'ny gazetiboky antserasera El Post Antillano i Francisco J. Concepción fa amin'ny ankapobeny, tsy lasa lavitra mihoatra ny antso fitakiana fandraisana andraikitra sy ny tamberin'andraikitra lehibe ao anatin'ny rafitra ara-toekarena ity raharaha ity. Araka ny filazan'i Concepción, tsy mankaiza afa-tsy ny mankany amin'ny fanamelohana ny fanaovan'ny tsirairay kolikoly ity raharaha ity – na amin'ny teny hafa, olana ara-pitondran-tena fotsiny. Nandrisika ny olona ihany koa izy mba handalina ny fiantraikany, na eo amin'ny lafin'ny votoatin'ny taratasy, sy izay mety ho adinon'izy ireo.
Mila hodinihantsika tsara ity raharaha ity ary mila mijery fa ny ao ambadiky ny famoahana ireo taratasy ireo, dia misy hery zeôpôlitika miditra mitady tombontsoa mazava tsara. Amin'izany fomba fijery izany, mila manontany tena isika hoe nahoana i Etazonia no tsy mipoitra ao amin'ireo antontan-taratasy ireo. Mila mandinika ihany koa isika hoe ahoana ny fiantraikan'ireo antonta-taratasy ireo amin'ny fifandraisana ara-jeopolitika ankehitriny. Na dia mazava aza fa zava-dehibe ny votoatin'izy ireo mba hahatakarana ny fomba fiasan'ireo manampahefana vitsy an'isa iraisampirenena, ilaina ny mamakafaka ireo antonta-taratasy ireo, satria mety azo ampiasaina ho fitaovana ara-potokevitra ho an'ny fahefana ara-toekarena manerantany tena izy.
Tamin'ny lahatsoratra tao amin'io gazetiboky io ihany, nampitandrina i Carlos Pérez Morales fa tsy ny rehetra voakasiky ny kabinetran'ny mpisolovava Mossack Fonseca no nanam-pikasana hiditra ao amin'ny fandosiran-ketra:
Satria misy olona voatonona ao amin'ireo antontan-taratasy ireo, tsy midika izany fa mpanao kolikoly ilay olona voatonona. Ara-dalàna ny orinasa offshore ao Panama. Azontsika lazaina fa maro amin'izy ireo no miasa toy ny orinasa ara-dalàna tsara. Simba ny endriky ny firenena ary ampoizina ny isian'ny fiantraikany goavana ara-toekarena avy amin'izany ampamoaka izany.
Taorian'izany fanjohin-kevitra izany ihany, tamin'ny lahatsarotra fanehoan-kevitra tao amin'ny The Bridge an'ny Global Voices, manontany i Roy Rojas hoe firy ny olona notsarain'ny hevi-bahoaka tsy ara-drariny [mg] :
Azo takarina tsara ny faniriana mieli-patrana hitady mangarahara amin'ny olan'ny fandosiran-ketra. Na izany aza, ny fanontaniana dia ny fisian'ny olona tsy manan-tsiny voadona vokatr'ity dingana ity. Tafihana tsy ara-drariny ve ny anarana malazan'ireo mpandraharaha sy mpisolovava manana etika? Tsy maintsy mitandrina tanteraka ireo mpanao gazety mpitari-dalana amin'ny fitateram-baovao momba ireo ampamoaka ireo alohan'ny amoahana anaran'olona ao amin'ity tany iveloman'ny vaovao mandrakizay ity.
Manoloana ny hafanam-pon'ny haino aman-jery nateraky ny famoahana ireo antontan-taratasy avy amin'ny Mossack Fonseca ireo, hoy izy namintina:
Ireo ohatra ireo dia manamafy ny anjara asa goavan'ny mpanao gazety amin'ny famolavolana ny hevi-bahoaka, tsy lazaina intsony ny tantara. Amin'ny volana ho avy, hisy indray ny zava-baovao hivoaka. Mety ho ekena amin'ny lanjan'ny zava-misy ny sasany amin'izany, mila fanazavana ara-dalàna kosa ny hafa. Ireo izay tafintohina amin'ny fanononana ny anarany dia tokony handroso sy hanazava ny antony mahatonga ny anarany tafiditra ao anatin'ny ampamoaka. Raha tsy manan-tsiny tanteraka kosa izy ireo, ny fotoana sy ny manampahefana isaky ny firenena no hanambara fa izany tokoa no zava-misy. Ho an'ireo tsy manan-tsiny sasany, na izany aza, azo inoana fa tsy afaka hamafa tanteraka ny anarany eo amin'ny fanehoan-kevi-bahoaka izy, ary eo no mipetraka ny olana.